Myat Thura: February 2007
There is now one internet cafe opened in Hakha, Chin State. The internet cafe opened at Shine Store is situated near the Clock Tower in downtown Hakha. The connection speed is painfully slow, and cost you 2,000 kyats an hour. Well, at least you are connected.
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 4:06 PM0comments
ဟားခါးက Internet Cafe
ဟားခါး မြို့ပေါ်မှာလဲ IP Star နဲ့ အင်တာနက် ကဖေး တစ်ခု ဖွင့်ထားပါတယ်။ Shine စတိုးမှာပါ။ မြို့လယ် လမ်းဆုံ နာရီစင် အနီးမှာ ရှိပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ ၆ လုံးလောက် ရှိပါတယ်။ ဈေးက တစ်နာရီ ၂၀၀၀ ကျပ်ကျပါတယ်။ Connection speed ကတော့ တော်တော်လေး နှေးပါတယ်။ Gmail နဲ့ gtalk သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးလောက်တော့ သုံးသူ မများပါဘူး။
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 4:03 PM0comments
You can also use internet in Kalay. There are now two internet cafes opened in Kalay. Moon Star Internet Cafe near Highway Bus Terminal is quite convenient and friendly to use. The connection speed is quite slow though, and it cost 1,500 kyat per hour, very expensive compared to Yangon and Mandalay. But still, there are many users there. Another one is in downtown Kalay but I haven't been there.
Labels: Kalay Myo, Myanmar Travel
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 3:58 PM 1 comments
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 3:30 PM 1 comments
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 3:28 PM2comments
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 3:12 PM 1 comments
ချင်းတွင်းမြစ်ရဲ့ အနောက်ခြမ်းမှာ ရှိတဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့ဟာ အတော်ကြီးတဲ့ မြို့ကြီးတစ်မြီု့ပါ။ အိန္ဒိယ နယ်စပ် တမူး ကုန်သွယ်ရေး လမ်းပေါ်က အချက်အချာ ကျတဲ့ မြို့ကြီးတစ်မြို့ ဖြစ်သလို ချင်းပြည်နယ်
မြောက်ပိုင်း မြို့တွေဖြစ်တဲ့ ဟားခါး၊ ဖလမ်း၊ ထန်တလန်၊ တီးတိန်၊ တွန်းဇံ မြို့တွေရဲ့ ဝင်ပေါက်လဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလွန်ပဲ စည်ကားလှပါတယ်။
ကလေးမြို့ဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး လူဦးရေလဲ များပြားပါတယ်။ ရပ်ကွက်ကြီး (၄) ခုရှိပြီး တာဟန်း ရပ်ကွက်ကတော့ နာမည်ကျော်ပါတယ်။ ချင်းလူမျိုး အများအပြား နေထိုင်ကြပြီး မြို့ လူဦးရေရဲ့ ထက်ဝက်ခန့် ရှိပါတယ်။ ကလေးက ချင်းအများစုဟာ ချင်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းက ဖြစ်ပြီး တီးတိန်က အများဆုံးပါ။
အားလုံးလိုလို ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လူနေမှု အဆင့်မြင့်မားပြီး ဝတ်စား
ဆင်ယင်မှုလဲ ခေတ်မှီ ကြပါတယ်။
ကလေးကို မန္တလေး ကတဆင့် ကားနဲ့ သွားနိုင်သလို လေယာဉ်နဲ့လဲ သွားနိုင်ပါတယ်။ Air Bagan က တစ်ပါတ် (၂) ကြိမ် ပျံသန်းပါတယ်။ လက်မှတ်ခက ၆၈၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးက ဟားခါး၊ တီးတိန်၊ တွန်းဇံ မှန်လုံကားတွေ နေ့စဉ်ထွက်ပါတယ်။ ကားကြီးဝင်း ကပါ။ တမူးကား တွေကတော့ ကားလေးဝင်းက နေ့စဉ် ထွက်ပါတယ်။
လေယာဉ်ကွင်းရှေ့မှာ တောင်ဇလပ်ဟိုတယ် ရှိပါတယ်။ ကားကြီးဝင်း အနားက ချင်းတောင်တန်း တည်းခိုခန်း ကတော့ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး ဈေးနှုန်း ချိုသာပါတယ်။ တစ်ဦးကို (၁၅၀၀) ကျပ်ပါ။ မနက်စောစော ဖလမ်း၊ ဟားခါးကား စီးမယ့် လူတွေအတွက် တည်းခိုဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Technorati Tag : Kalay Myo, Myanmar, Burma
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 3:10 PM0comments
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 1:45 PM 1 comments
Here is the video I took of Chin National Day 2007 in Hakha, Chin State. This one is the ceremony to honor the maiden who has been chosen by the Saw-bwa. Don't take it wrong. There is no Saw-bwa in Chin Hills now but this ceremony isareplica of the ancient tradition.
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 1:35 PM0comments
Somebody posted this very nice video clip on Myanmar arts and culture on Youtube.
Technorati Tag: Myanmar Arts
According to recent news article from Scientific America, fighting TB is as simple as openingawindow. Researchers in Peru found that good ventilation helps prevent spread of TB in hospitals. Good ventilation reduces the amount of germs in the air thus reducing the chance of contracting TB as well as other air borne diseases. WHO also recommends natural ventilation as one way to limit spread of TB. So next time when you see someone cough near you, just open the window.
Technorati Tag : Tuberculosis, Health
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 5:44 PM0comments
After upgrading my blog from old blogger toanew blogger, I dicided it is time I should change my blog design from the old one toanew cleaner fresher look. The old blog is quite clattered and difficult to read. So I have removed some of the old things and changed toanew look. The old entries stayed there, but I updated some of them with labels so that my readers could find the interesting articles with ease. I hope the new blog design will make it easier for my readers to read my blog. Thank you for visiting my blog.
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 12:16 PM0comments
I got cold now because of dust and hot weather. I didn't get cold in Chin Hills although it is very cold over there. Eventually, I was turning into someone who cannot tolerate heat anymore. I have been in Chin Hills for more than two years now and I am now so accustomed to cold weather that the heat makes me feel sick.
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 11:24 AM0comments
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 3:32 PM0comments